Iimpawu zeZodiac ezihambelana noThando kunye noBomi - Khetha Uphawu
Khetha iSayina sakho ukuze ubone zonke iimidlalo ezihambelanayo.
x Ukuhambelana kwe-Aquarius NgoJanuwari 20-Februwari 18 Ukuhambelana kweePisces NgoFebruwari 19-Matshi 20 Ukuhambelana kwama-Aries Matshi 21-Aprili 19 Ukuhambelana kweTaurus NgoAprili 20-Meyi 20 Ukuhambelana kweGemini NgoMeyi 21-Juni 20 Ukuhambelana koMhlaza NgoJuni 21-Julayi 22 leo Ukuhambelana NgoJulayi 23-Agasti 22 Ukuhambelana kweVirgo Agasti 23-Septemba 22 Ukuhambelana kweLibra NgoSeptemba 23-Okthobha 22 Ukuhambelana kweScorpio Oktobha 23-Novemba 21 Ukuhambelana kweSagittarius NgoNovemba 22-Disemba 21 Ukuhambelana kweCapricorn NgoDisemba 22-Januwari 19 Iimpawu zeZodiac ITarot Ukuvumisa ngeenkwenkwezi Uthando Ukuhambelana Ikhalenda yeZodiac Izinto Izindlu ezili-12 IiPlanethi Iimpawu Itshathi Yokuzalwa
Ukuhambelana kweempawu zeLanga
NgeLanga elichaza inxalenye ethile yobuntu bethu, kufuneka sivume ukuba iya kuba nefuthe kwiziko elifanayo lamandla kubo bonke abanye abantu. Ngokwale mbono,ukuhambelana kweempawu ezahlukeneyo zeLangaithetha ngethuku lokuqaphela kunye nezinto ezinokubakho abantu ababini zokuhlonelana. Nangona le micimbi iya kubonakala kuphela ngabalawuli bemiqondiso apho amaLanga amabini abekwe kunye nezinye izikhundla zomntu, olu hlobo lokutolika lusinika ingqiqo malunga nolwazi olusisiseko omnye umntu analo ngomnye. Iza kuthetha ngendlela amandla okudala aya kudibana kwaye akhule ngayo, amanyathelo abantu ababini ayangqubana okanye axhasane, kwaye ukuba baya kufumana ngokukhawuleza uBumbano phakathi kobuntu babo okanye hayi.
Ingxelo nganye ehambelanayo efunyenwe kula maphepha yifestile encinci kwihlabathi leubudlelwane, esinceda siqonde oko omnye umntu azabalazela kona kwanobunzima anokujamelana nabo mihla le. Injongo yolu toliko ayikokuchaza ukuba ubudlelwane obunokuthi buhlale okanye buphumelele, kodwa kukusinceda ukuba sifumane ukuqonda okunzulu kumntu omi phambi kwethu, ebonisa ubuntu bethu nabo bonke ubuthathaka kunye namandla abo. Ukuba sibona ukukhanya kwabanye abantu, siya kukwazi ukubona ngokwenene indima yabo ebomini bethu kwaye sifumane iindlela zokukhanya kunye, ukuphakamisa ulwazi kunye nokwakha ihlabathi elingcono kumntu wonke.
Akukho ndlela yokuqonda ngokupheleleyo ubuntu obubini kunye nokunxibelelana kwabo okusekwe kuphela ekusebenzisaneni kweempawu zabo zeLanga. Ukuze sisondele ngokwenene kubudlelwane phakathi kwabantu ababini njengequmrhu elikhethekileyo eliphila ubomi balo, kufuneka sisebenzise idatha yobuqu, zombini iitshathi zokuzalwa, uthelekiso lwabo, kunye neendlela ezifana ne-midpoint kunye nendlela kaDavison ukuze sifumane amabali athile ngamnye. isibini. Kanye njengokuba kungenakwenzeka ukujonga bonke abantu ngeedrowa ezilishumi elinesibini zeempawu ezilishumi elinesibini ezisisiseko zeLanga, akunakwenzeka kwakhona ukujonga ubudlelwane babo ngokusekelwe kulwahlulo olufanayo.
ILanga kunye Nobuntu
Ubuntu buchazwa kakhulu kwindawo yeLanga yokuzalwa. Nangona iya kubonisa kuphela ukukhanya kumlinganiswa, iLanga isengowona mzimba mkhulu kwiSolar System. Isinika ubomi kwaye yenza ukuba yonke enye into iyijike, kwaye iyakumela indalo umntu anokuthi athembele kuyo ngokuhamba kweminyaka. Kukukhanya kwethu kwangaphakathi kunye notsalo lwethu lomxhuzulane, olusichaza kwangethuba nokuba lubonakala ngomphathi wethu, ubawo, igunya, okanye nabani na ongomnye kumfuziselo walo. Sonke senza konke esinako ukufikelela kumandla avela kwiLanga lethu lobuqu kwaye kusinceda ukuba siwave amandla entando nakwabanye abantu. Umqondiso wethu weLanga uya kusifundisa ngemida yobuqu, intlonipho kuthi nakubo bonke abanye, kwaye sithethe ngendlela yethuku esinayo kubantu abohlukeneyo abeza ebomini bethu.
Aries Isagittarius Virgo Ngena Pisces